February 2019 – Kalfadhi
February 28, 2019 February 28, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Degmada Waaciye ee gobolka Karkaar waxaa maanta lagu aasay xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo xalay ku dhintay shil baabuur ka dhacay deegaankaas. Maxamed wuxuu ka mid ahaa golaha wakiillada Puntland, gaar ahaan xubnaha dhalinyarada ah ee cusub. Sanadkii 1987 ayuu ku dhashay degmada Boosaso, halkaas oo uu kaga baxay ilaa dugsiga sare, sidoo kale kulliyadda dhaqaalaha ayuu ku diyaariyay jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaso oo uu ku qaatay heerka koowaad (Bachelor’s Degree). Wuxuu ahaa Aabaha Siddeed carruur ah (Lix wiil iyo laba gabdhood) iyo saddex xaas. Eheladiisa oo aan waraysannay…
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulahi Deni ayaa galabta guddi heer wasaaradeed ah u saaray u kuurgelidda xaaladda abaaraha ee ay xiligan jiilaalka ah wajahayaan xoola-dhaqatada iyo beeralayda Puntland. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu saaray guddigaas. Arrinta abaaraha ayaa ka mid ahayd qodobada lagu lafa-guray shirkii golaha wasiiradda ee maanta. Wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbedelka cimilada, wasaaradaha Caafimaadka, Xannaanada Xoolaha, Qorshaynta iyo Arrimaha gudaha ayaa il gaar ah ku hayn doona xaaladda abaaraha. Roobkii dayrta ayaan ka di’in inta badan Puntland isla markaasna meelaha uu helay ayuu…
Xeer Ilaalinta Puntland oo sheegtay in eheladu ay ku khasbaan dhibanayaasha kufsiga in ay beeniyaan wixii ku dhacay
Xeer Ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Axmed Aw-Cismaan ayaa sheegay in bulshadu ay si walba isugu daydo in ay baabi’yaan kiisaska kufsiga ah ee dhaca, mararka qaarna iyagoo maxkamadaha soo gaaray la isku dayo in dib loo celiyo. Wuxuu sheegay in kiisasku hadii ay maxkamadaha soo gaaraan ay san xeer ilaalintu ka ogolaan dhinacyada ku lugta leh in ay celiyaan oo ay heshiis hoose ku dhamaystaan. Xeer Ilaaliyaha ayaa xusay in caqabaddu ka jirto marka qofka dhibbanaha ah lagu soo qabso inuu ka noqdo kiiskiisa isla markaasna uu qofkaasi xeer…
Xildhibaan Xidig oo kismaayo kulamo kula qaatay siyaasiin iyo odayaal
February 28, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobalka Jubada Hoose kulamo kula qaatay odayaal iyo siyaasiin ku sugan M/Kismaayo ee Xarunta Kumeel-gaarka ah ee Maamulka Jubbaland. Dadka uu lakulmay waxaa kamid ah Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Maamulka Jubbaland, Siyaasiin hore Xilal uga soo qabtay Soomaaliya oo kismaayo ku sugan qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee Gobolka Jubada Hoose. Xidig ayaa dhinacyadii uu la kulmay kala hadlay Xaaladad Jubbaland iyo doorashooyinka Maamulkaasi ee sanadkaan 2019. Xildhibaanada uu la kulmay…
Senator Bulsho “Axmed Madoobe waa In uu ka hadlaa boobka Kenya ee Badda Soomaaliya, maadaama uu Xiriir dhow la-leeyahay”
Senator Axmed Cabdixafiid Bulsho oo katirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana ka mid ah Xubnaha ka soo jeeda degaanada Maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay boobka Kenya ee Badda Soomaaliya iyo Xiisadda labada dowladood u dhaxeysa ee Muranka Badda. Senator Bulsho ayaa sheegay in Kenya ay is bideyso awood aysan lahayn hadii ay sidaan wax ku sii socdaana laga yaabo in labada dowladood uusan mar dambe hagaagin Xiriirka u dhaxeeya. Waxa uu sheegay in ay jiraan dhinacyo Soomaali ah oo Kenya ku dhiiri-gelinaya in ay Badda muran ka keento si…
Aqalka Sare oo kulan deg deg ah ka yeeshay Kufsigii Gaalkacyo
Guddiga Arimaha Diinta iyo Xuquuqul Insaanka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan deg deg ah ka yeeshay falkii foosha Xumaa ee todobaadkaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobalka Mudug, kaas oo ahaa Kufsi iyo dil loo geestay Gabar 12 sano jir ah. Guddiga ayaa cambaareeyay falkaas waxayna ku tilmaamayn nabar xanuun badan oo soo gaaray Haweenka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxayna Maamulka Puntland ugu baaqayn in cadaaladda la wafaajiyo dadkaas falkaasi ka dambeeyay. “Wax laga xumaado oo aan loo dulqaadan karin ayaa ka dhacay Gaalkacyo mana…
Xildhibaan ka tirsanaa golaha wakiillada Puntland oo caawa shil ku geeryooday
February 27, 2019 February 27, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo ka mid ahaa golaha wakiillada Puntland ayaa caawa ku geeryooday shil gaari oo ka dhacay aaga tuulada Alxamdullilaahi oo ka tirsan degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. Shilkaas waxaa sidoo kale ku geeryooday nin dhalinyaro ah oo ay xildhibaanka ehel ahaayeen isla markaasna baabuurka la socday. Baabuur booyad ah iyo kan uu saarnaa xildhibaanka ayaa isku dhacay, sida ay noo sheegeen ilo xog ogaal ah oo aan la xiriirnay. Rugta caafimaadka ee degmada ayaa la dhigay maydka laba marxuum. Marxuum Faarax wuxuu ka mid ahaa xubnaha…
Nabadoon Yaasiin “Hadii uu dhab idinka yahay mudaharaadku, kuwa hadda u xiran kufsiga ilaa sharciga lagu fuliyo ha harsanina”
Duqa KMG ah ee degmada Gaalkacyo isla markaasna ka mid ah nabadoonada gobolka Mudug mudane Yaasiin Cabdisamad ayaa si adag u dhaleecayay in gogol la isugu dhigto isla markaasna hab beeleed lagu xaliyo kiisaska la xiriira kufsiga. Mar uu maanta hadal ka jeediyay kulan ka dhacay Gaalkacyo oo lagaga hadlayay kiiska dilka iyo kufsiga ahaa ee Caasho Ilyaas oo 12 jir ahayd, ayuu sheegay in marar badan uu ka shaqeeyay kiisas aan xaq ahayn oo ku dhisan xeer beeleed. “Illaahow markhaati iiga ahaw, raali kama ihi kamana noqonayo, daalimiinta kufsiga…
Xildhibaan C/rashiid Xidig “Taariikhda ayaa xusi doonto wixii maanta Kismaayo loogu geestay taageerayaasheyda”
February 27, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa ka hadlay is hortaag lagu sameeyay boqolaal tagaarayaashiisa ah oo ku sugnaa Wadooyinka Kismaayo kuwaas oo damacsanaa in ay soo dhoweeyaan asaga iyo wafdigiisa. Shacabkaan ayaa waxa is hortaagay Ciidamada amaanka ee Maamulka Jubbaland waxaana la sheegay in la jirdilay qaarkoodna la hanjabay sida ay warbaahinta u sheegayn qaar kamid ah oo Kismaayo ka hadlay. “Mahad gaar ah Waxaan u celinayaa Shacabka reer Jubaland ee maanta u diyaar garoobay soo dhaweyntayda balse laga hor istaagay”…
February 27, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Xisaabiyaha guud ee Puntland Cabdirisaaq Siciid Nuur ayaa maanta faray shirkadaha daabacadda ee Puntland in aysan samayn karin buugaagta lacag bixinta, kuwa lacag qabasahda iyo kuwa ay lacagtu ku waajibtay ee ay isticmaalaan xafiisiyada kala duwan ee dowladdu, ilaa uu xisaabiyuhu ogolaado. Warqad ka soo baxday xafiiskiisa ayuu ku sheegay in loo baahan yahay in xafiisyada kala duwan ee dowladu ay maraan habraaca maamulka iyo maaliyadda ee dowladda Puntland, kaas oo dhigaya in dikumeentiyada qiimaysan ee lacagaha lagu qabto laguna baxsho dalabkooda koowaad iyo dib u daabacashoodaba loo maro ogolaansho…